Lacagtaada: Canshuurta Dowlada Hoose (council) | Southampton New Communities
Waa Maxay Canshuurta Dowlada Hoose?
Canshuurta dowlada hoose waa canshuurta degaanka oo ay qaado dowlada hoose ee degaanka. Canshuurtaas waxaa lagu bixiyaa howlaha degaanka sida lacagta booliiska iyo aruurinta qashinka. Waa canshuur laga qaado guryaha ay dadku degan yihiin, tusaale ahaan flatyada iyo guryaha. Waxaana laga qaadayaa dhamaanba guryaha haddii aad leedahay iyo haddii aad ijaaratayba. Dadka qaarkiis ma aha inay bixiyaan canshuurtaas qaarna waxbaa laga dhimaa canshuurta. YAA BIXIYA?
Guri walba waxa uu leeyahay hal bill oo ah canshuurta degaanka; kaasi waxa uu noqon karaa guri, flat ama hal qol. Badanaaba qofka halkaas degan ayaana bixiya biilkaas. Ka raqiisinta Canshuurta Degaanka ayaa laga yaaba in lagu ogolaado xaaladaha qaarkood, tusaale ahaan haddii aad kaligaa degan tahay. Wixii warbixin dheeraad ah ee ku saabsan ka raqiisinta iyo ka deynta waxaad ka fiirisaa tafaasiisha la socota biilka lagu soo diray ama soo wac telefoonka ah 023 8083 2349.
Waxaad biilkaada ku bixin karaa si tartiib tartiib ah taasoo ka muuqata biilka. waxaadna u bixin kartaa habab kala duwan sida direct debit, credit ama debit kaar, lacag bixinta internetka ama boostada. Tafaasiisha sida aad ku bixin kartaa waxay ku taal biilka. Ha la daahin bixinta biilkaas ama dowlada hoose waxay qaadi doontaa talaabo ay kula soo noqonayso lacagteeda. Haddii aadan bixin canshuurtaada dowlada hoose, markaa waxay soo saari doonaa amar. Maxkamaduna waxay siin doontaa Amarka Bixinta kaasoo macnahiisu yahay inay lacagta ka jaran karaan jeegaada shaqada ama caawinaadaada. Waxaa sidoo kale ay gurigaada u soo diri karaan dadka lacagta qaada ama loo yaqaan (bailiff).
Markii aad guri cusub u guurto ama aad ka guurto midka aad degan tahay waxaa qasab ah inaad u sheegto dowlada hoose, midaasina waxay u ogolaanaysaa in canshuurtaada la xisaabo.
Warbixinta aad kala xariiri karto: Telefoonka ah: 023 8083 2349 Ugu soo qor waraaqaha: Local Taxation Services, Civic Centre, Southampton, SO14 7LD Email council.tax@southampton.gov.uk Fax: 023 8083 2144
Caawinaada Canshuurta Dowlada Hoose (Council)
Si aad u ogaato inaad u qalanto in laga caawiyo bixinta biilkaada kala xariir Howlaha Caawinaada:
Telefoonka ah: 023 8083 2031
Ugu soo qor waraaqaha: Benefit Services, Southampton PO Box 954, SO14 2YH
Wixii warbixin dheeraad ah halkaan riix